Mpanamboatra sy mpamatsy fantsona 200A | China 200A Cable Accessories Factory
Manampy an'izao tontolo izao izahay amin'ny 2004
Fanohanana mailaka leo@anhelec.com
Fitaovana tariby mandeha amin'ny herinaratra
200A Fitaovana tariby
250A Fitaovana tariby
600A Fitaovana tariby
Fitaovana tariby 630A
Connector arrester an'ny mpandeha elbow
Kilasin'ny mpamaky jiro
kojakoja fisamborana varatra
Tube Tube Mihena
Tube mangatsiaka mangatsiaka
Komponenan'ny Transformer Pad Mounted
Meters ho an'ny mpanova
Fialantsasatra hafa ho an'ny mpanova
Transformer ankehitriny sy mety
10kV mpanova mety
20-35kV Transformer ankehitriny
Busbar Type Transformer ankehitriny
Transformer amin'izao fotoana izao
Transformer azo itobiana amin'ny tendrontany
Mekanisma miasa amin'ny singa fototra
Mpanaparitaka boribory vacuum miaraka amin'ny mpanokana
Switch Main Unit Loadbreak Switch
Fifi PT Elbow Connector
24kV 200A Asiana Bushing
24kV 200A Atsofohy Feedthru Asiana
Anhuang manam-pahaizana manokana amin'ny Elbow Surge Arrester, izahay dia manome ny arresteropan'ny elbow avo lenta. Mifanaraka amin'ny fenitra IEEE386, sy IEC ny vokatray. Fitarihan-kevitra: 17 / 50kV loadbreak Elbow Surge Arrester miaraka amina trano mpampitohy vita amin'ny silipo ary apetraka amin'ny 200A Load break bushing extender. Izy io dia miaro ny tamba-jotra malefaka antonony, ohatra: transformer switch sy tariby. Ny fidirana amin'ny onja mahery sy ny fiakaran'ny herin'ny herinaratra dia voafetra. Reference Reference No. Mpitohy mitohy ...
Anhuang manam-pahaizana manokana amin'ny Elbow Surge Arrester, izahay dia manome ny arresteropan'ny elbow avo lenta. Mifanaraka amin'ny fenitra IEEE386, sy IEC ny vokatray. 34kV Surge Arrester Insert dia be mpampiasa amin'ny tambajotram-pifandraisana antonony, toy ny peratra fanovana sy tariby ary fitaovana hafa. Firafitry ny vokatra 1.EPDM INSULATION: solifara avo lenta nositranina insulated EPDM dia mifangaro sy voarindra ao an-trano ho an'ny fifehezana tanteraka ny toetra mampiavaka ny rubber. 2.SEMI-CONDUCTIVE SHIELD: bobongolo semi-conducti ...
Anhuang manam-pahaizana manokana amin'ny Elbow Surge Arrester Insert, manome elastika ambony Elbow Surge Arrester Insert izahay. Mifanaraka amin'ny fenitra IEEE386, sy IEC ny vokatray. 17 / 50kV Surge Arrester Insert dia be mpampiasa amin'ny tambajotram-pifandraisana antonony, toy ny fitaovana miovaova sy ny tariby ary ny hafa, ampiasaina miaraka amin'ny kojakoja fambolena enta-mavesatra toy ny mpampitohy elbow bushing sy satroka fiarovana voaro. Firafitry ny vokatra 1.EPDM INSULATION: solifara avo lenta nositranina insulated EPDM dia mifangaro sy mamolavola ...
Anhuang manokana amin'ny Class Bushing Extender, manome kilasy Class Bushing Extender avo lenta izahay. Ankapobeny: 600A extender bushing class dia mamela fametrahana amin'ny pataloha 600A maty matihanina ho an'ny fitambarana mampihena ny paompy, mampifandray plugs ary mitifitra fitaovana. 200A Load break interfaces ho an'ny arrester surge arrester sy electeur mampitohy. Rehefa atambatra amin'ny fitaovana fampakaram-bady izy io, dia manome fitaovana azo arovana sy arovana tanteraka. Kit anatiny: EPDM bushing extender Clearing Paper ...
Fitarihan-kevitra: 15kV 200A Load break Elbow Connector dia famaranana plugin miaro sy voaroaka tanteraka amin'ny fampifandraisana tariby ambanin'ny tany mba hizara ny rafitra herinaratra fanodinana pad-mound, boaty sampana famatsiana herinaratra manodidina, boatin'ny sampana tariby miaraka amina lozam-pifamoivoizana. Ny mpampitohy kiho sy ny sisin'ny bushing dia misy ny singa ilaina amin'ny fifandraisana tapaka rehetra. Izy io dia afaka mamaly ny filan'ny tsipika amin'ny nokleary. Fampiharana: Loadbreak Elbow Connector dia miaro tanteraka ary ao ...
Anhuang manokana amin'ny Bushing tsara, manome loharano Bushing avo lenta izahay. Mifanaraka amin'ny fenitra IEEE386, sy IEC ny vokatray. Fampidirana: 15kV / 24kV 200A Bushing Well dia be mpampiasa amin'ny boriborintany avo lenta an'ny mpandika mitaingina pad, mitaingina, fehikibo sns. Sns. manapaha bushing. Ny bushing dia ampiasaina miaraka amin'ny kojakoja tariby toy ny: bushing insert, Rotatable F ...
15kV 200A Asiana Bushing
Anhuang manokana amin'ny fampidirana Bushing, manome fampidirana Bushing avo lenta izahay. Mifanaraka amin'ny fenitra IEEE386, sy IEC ny vokatray. Fitarihan-kevitra: 15kV 200A Bushing mampiditra kofehy ao anaty fantsom-boaloboka manerantany hanomezana fiasa mitovy amin'ny fantsom-panafahana enta-mavesatra. Ny fampiasana ny tsindrona bushing dia mahatonga ny fametrahana sy fanoloana saha azo atao ary mahomby. Ny fampidirana bushing sy ny kofehy mpampitohy mampitombo ny singa ilaina amin'ny fifandraisana tapaka rehetra. Ny bushing Insert dia mampiasa patanty ...
15kV 200A Loza Break Elbow Connector
Anhuang manokana amin'ny Load break Elbow Connector, manolotra Loadbreak Elbow Connector avo lenta izahay. Mifanaraka amin'ny fenitra TEEE386, sy IEC ny vokatray. Fampidirana: 25kV 200A Load break Elbow Connector dia famaranana plugin miaro sy voaroaka tanteraka amin'ny fampifandraisana ny tariby ambanin'ny tany mba hizara ny rafitra herinaratra fanodinana pad-mound, boaty sampana famatsiana herinaratra manodidina azy, boatin'ny sampana tariby miaraka amina lozam-pifamoivoizana. Ny mpampitohy kiho sy ny sisin'ny bushing dia misy ny essentia ...
Anhuang manokana amin'ny Loadbreak Elbow Connector, manolotra Loadbreak Elbow Connector avo lenta izahay. Mifanaraka amin'ny fenitra IEEE386, sy IEC ny vokatray. Fitarihan-kevitra: Elbow Connector dia famaranana plug-in voaro sy voafitaka tanteraka ho an'ny fifandraisana tariby ambanin'ny tany mba hizara ny rafitra herinaratra fanodinana pad-mound, boaty sampana famatsiana herinaratra manodidina azy, boatin'ny sampana tariby miaraka amina lozam-pifamoivoizana. Ny mpampitohy kiho sy ny fampidirana bushing dia misy ny singa tena ilaina amin'ny ...
15kV 200A Ampidiro ao anaty feedthru
Anhuang manam-pahaizana manokana amin'ny Rotatable Feedthru Insert, manolotra fampidirana Rotthable Feedthru avo lenta. Ny vokatra dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny IEEE Standard 386 ary azo ovaina tanteraka amin'ny vokatra mpifaninana. 15kV 200A Ireo kofehin-tsolika azo alaina azo soloina ao anaty lavadrano iray manontolo mba hanomezana fiasa mitovy amin'ny famafazana loadbreak integral. Ny fampiasana ny tsindrona bushing dia mahatonga ny fametrahana sy fanoloana saha azo atao ary mahomby. Fampidirana bushing sy mpampifandray kiho dia misy ...
Anhuang manam-pahaizana manokana amin'ny Rotatable Feedthru Insert, manolotra fampidirana Rotthable Feedthru avo lenta. Mifanaraka amin'ny fenitra IEEE386, sy IEC ny vokatray. Fitarihan-kevitra: 24kV 200A azo ampidirina feedthrough azo ampidirina ao anaty lavaka fanangonam-bidy roa well Manatsara ny fanovana ireo mpanova sakafo radial mba hanomezana sakafo an'ireo mpanova ary manampy ny fiarovana ny mpandahatra an-tserasera na mora na azo ampiharina. Ny torolàlana misy torolàlana mifono pataloha izay mametra ny ratchet dia manakana ny mpandraharaha tsy nahy b ...
Anhuang manokana amin'ny fampidirana Bushing, manome fampidirana Bushing avo lenta izahay. Mifanaraka amin'ny fenitra IEEE386, sy IEC ny vokatray. Fitarihan-kevitra: 24kV 200A Bushing dia mampiditra kofehy ao anaty lavadrano manerantany mba hanomezana fiasa mitovy amin'ny famafazana entana. Ny fampiasana ny tsindrona bushing dia mahatonga ny fametrahana sy fanoloana saha azo atao ary mahomby. Ny famafazana bushing sy ny kofehin-kiho dia misy ny singa ilaina amin'ny fifandraisana tapaka rehetra. Ny bushing Insert dia mampiasa w patent ...
Address: No.217, lalana Wei12, Faritra fampandrosoana ara-toekarena Yueqing, Tanàna Yueqing, Faritanin'i Zhejiang, Sina
Fanasokajiana mpihazakazaka mahazatra
Endri-javatra an'ny Mpisambotra mahazatra
Karazana arrester ny varatra vaovao dia appli ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-18